कोरोना संक्रमितका लागि चीनले ६ दिनमा बनाउँदै हजार शैयाको अस्पताल | Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ कोरोना संक्रमितका लागि चीनले ६ दिनमा बनाउँदै हजार शैयाको अस्पताल
कोरोना संक्रमितका लागि चीनले ६ दिनमा बनाउँदै हजार शैयाको अस्पताल
This image shows aerial view of excavators at the construction site ofanew hospital being built to treat patients fromadeadly virus outbreak in Wuhan in China's central Hubei province, on Friday, January 24, 2020. China is rushing to buildanew hospital inastaggering 10 days to treat patients at the epicentre ofadeadly virus outbreak that has stricken hundreds of peopl. Photo: AFP
११ माघ, काठमाडौं । चीनको वुहान सहर घातक कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ । १० लाख जनसंख्या रहेको वुहानमा संक्रमण फैलिन थालेको छ र ८३० संक्रमित भेटिएका छन् ।
४१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
अस्पतालहरुको स्थिति चिन्ताजनक छ । विरामीको भीड लागेको छ र औषधिको अभाव हुन लागेको छ ।
र, विरामीको उपचारका लागि नयाँ अस्पताल बनाइँदैछ । यो अस्पताल मात्र ६ दिनमा तयार हुनेछ । एक हजार शैयाको यो अस्पताल बनाउन कुुन रफ्तारमा काम भइरहेको भन्ने चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रशारित भिडियोमा देखिन्छ ।
अस्पतालका लागि २५ हजार वर्गमीटर भएको इलाकामा थुप्रै डोजरले एकसाथ खन्ने काम गरिरहेका छन् ।
चीनले २००३ मा सार्स भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुको उपचारका लागि बेइजिङमा यसरी नै अस्पतल बनाएको थियो । त्यसबेला ७ दिनमा अस्पताल बनेको थियो । अहिले त्यो रेकर्ड तोड्ने प्रयास हुने काउन्सिल अन फरेन रिलेशनमा ग्लोबरल हेल्थका सिनियर फेलो यानजोङ हुआन बताउँछन् ।
यो अस्पताल पि्र फेबि्रकेटेड मेटेरियलबाट बनाइनेछ ।
यो काम समयमै सम्पन्न गर्न देशका विभिन्न भागबाट इन्जिनियरहरुलाई बोलाइएको छ । औषधि अभाव टार्न पनि वुहानले अरु अस्पतालबाट आपूर्ति गर्ने वा सिधै कम्पनीसँग किन्ने योजनामा विचार गरिरहेको छ ।
Previous article३५ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको विक्रम थारु पक्राउ
Next articleआँखामा खुर्सानीको धुलो छर्किएर ४८ लाख रुपैयाँ लुटे